Akụkọ - Ngosipụta Samsung na-akwado ịgbasa ikike nrụpụta ogwe OLED obere na ọkara ha na South Korea
IPS-TFT LCD modulu
Modul IPS-TFT LCD nwere ogwe aka
TN-TFT LCD MODULES nwere ogwe aka aka
Ngosipụta na bọọdụ ọkwọ ụgbọ ala
Ngosipụta Samsung na-akwado ịgbasa ikike imepụta ogwe OLED obere na ọkara na South Korea
Oge Beijing na Nọvemba 25th, China Touch Screen News, Samsung na-ezube ịgbasa ike mmepụta nke ogwe OLED, ọgbọ ọzọ nke mgbanwe. OLED Enwere ike ihu ihu ugboro 200,000. Dị ka akụkọ mgbasa ozi si mba ọzọ si kwuo, Samsung Ngosipụta, nke nwere uru doro anya n'ọhịa nke obere OLED panels chọrọ maka smart phones, na-akwadebeworị ịgbasa ikike mmepụta OLED ha na South Korea.
Dabere na akụkọ sitere na mgbasa ozi si mba ọzọ, Samsung Ngosipụta na-ezube ịgbasa ikike nrụpụta OLED ya maka imepụta ogwe QD-OLED maka TV na ogwe OLED maka ngwaahịa IT ndị ọzọ.
Akụkọ mgbasa ozi mba ọzọ na-egosikwa na Samsung Ngosipụta na-emeziwanye ikike mmepụta nke ogwe OLED site n'ịgbanwe ụfọdụ ụlọ ọrụ panel LCD ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ OLED panel.
Ngosipụta Samsung ekpebiela ịhapụ ahịa ahịa TV LCD panel wee jiri nwayọ hapụ mmepụta. Mgbasa ozi si mba ọzọ kwukwara na akụkọ ahụ na ha edochiri akụrụngwa na LCD TV panel mmepụta akara nke L7-2 factory na 6th ọgbọ OLED panel mmepụta akụrụngwa na-emepụta obere na ọkara-sized OLED panels. A na-ewepụkwa akụkụ nke akụrụngwa na nnukwu oghere mmepụta LCD panel nke ụlọ ọrụ L8-1, a na-ejikwa ohere efu iji wụnye QD-OLED TV panel mmepụta akara.
N'ime akụkọ ahụ, mgbasa ozi mba ọzọ kwuru na ahịrị mmepụta panel QD-OLED TV nke ụlọ ọrụ L8-1 nwere ikike iko iko 30,000 kwa ọnwa, nke pụtara na ọ nwere ike iwepụta 1 nde 55-inch na 65-inch QD-OLED TV. panel kwa afọ. .
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ L8-1 ka nwere ohere mgbe ị wụnyechara ahịrị mmepụta panel QD-OLED TV, ndị mgbasa ozi mba ọzọ na-atụ anya na Samsung Ngosipụta nwere ike ịga n'ihu na-eji ya gbasaa ikike mmepụta nke ogwe TV QD-OLED, ma ọ bụ wụnye OLED ọgbọ 8.5. ahịrị mmepụta panel.
Na mgbakwunye, dị ka onye ndu na obere ihuenyo OLED, Samsung ekpugherela nkọwa nke ọgbọ ọzọ nke ihuenyo OLED na-agbanwe agbanwe. N'ụzọ doro anya, nke a na-akwado maka igwe ọhụrụ ọzọ.
Site na nkọwa nke ngosipụta gọọmentị Samsung, ihuenyo OLED ọhụrụ na-agbanwe agbanwe emeela ka ndụ mpịachi ya dịkwuo mma. N'okpuru ojiji nkịtị, ndị ọrụ nwere ike gbadaa 200,000 ugboro na-enweghị mmebi, yabụ ọ bụrụhaala na ị na-eji ya eme ihe, afọ 5 karịrị ezuru.
Na mgbakwunye, iji mee ka ngosipụta ihuenyo ka mma, oge a kpuchie ihuenyo ọhụrụ ahụ na UTG ultra-thin glass iji dozie mpịachi (dị ogologo) na mmetụta ngosipụta.
Banyere curvature nke ihuenyo, nkọwa Samsung wepụtara na-egosi na enwere ike nweta radius mpịachi nke 1.4R (1.4mm). Nke a nwere uru nke ibelata ihe isi ike nke imewe hinge na ibelata ọnụ ahịa ma na-ebelata nrụgide mpịachi.
Enwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị dị njikere mgbe niile inyere gị aka.
3/F, Ụlọ nke atọ, Jia'anda Industrial Park, Longhua District, Shenzhen, China
Kpọọ anyị ugbu a: 18146681518